Esdrasa 7 - Ny Baiboly
Esdrasa toko 7
Ny niverenan'i Esdrasa - Taratasin'i Artakserksesa manome azy fahefana feno.
1Taty aorian'ireo zava-niseho ireo, tamin'ny andro nanjakan'i Artaksesksesa mpanjakan'i Persa kosa indray, Esdrasa, zanak'i Saraiasa, zanak'i Azariasa, zanak'i Helkiasa, 2zanak'i Seloma, zanak'i Sadaoka, zanak'i Akitoba, 3zanak'i Amariasa, zanak'i Azariasa, zanak'i Maraiota, 4zanak'i Zarahiasa, zanak'i Ozì, zanak'i Boksi, zanak'i Abisoe, 5zanak'i Finea, zanak'i Eleazara, zanak'i Aarona mpisorona lehibe; 6niakatra avy any Babilona io Esdrasa io. Ary satria nomba azy ny tànan'ny Tompo Andriamaniny, dia nomen'ny mpanjaka azy avokoa izay rehetra nangatahiny. 7Maromaro koa tamin'ny zanak'Israely, mpisorona, levita, mpihira, mpiandry varavarana, ary natineana, no niakatra ho any Jerosalema tamin'ny taona fahafito nanjakan'i Artakserksesa mpanjaka. 8Tonga tany Jerosalema Esdrasa, tamin'ny volana fahadimin'ny taona fahafito nanjakan'ny mpanjaka. 9Tamin'ny andro voalohan'ny volana voalohany izy no niainga hiakatra niala tany Babilona ary tamin'ny andro voalohan'ny volana fahadimy no nahatongavany tao Jerosalema, nomban'ny tànan'Andriamaniny manisy soa. 10Nandraikitra ny fony amin'ny fianaran'ny lalàn'ny Tompo Esdrasa, ary nanaraka azy, ary nampianatra an'Israely ny lalàna amam-pitsipika.
11Izao no kopian'ny taratasy nomen'i Artakserksesa mpanjaka, an'i Esdrasa - izay mpisorona sy mpampiana-dalàna, mpampiana-dalàna mahay ny didy aman-dalàn'ny Tompo ny amin'ny momba an'Israely.
12Artakserksesa mpanjakan'ny mpanjaka, ho an'i Esdrasa mpisorona sy mpampiana-dalàna, mahay ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra, etc.
13Efa nanome teny aho hoe: izay rehetra isan'ny vahoakan'Israely, ny mpisorony sy ny levitany, izay eto amin'ny fanjakako, ka ta-handeha ho any Jerosalema, dia mahazo miaraka aminao. 14Fa irahin'ny mpanjaka sy izy fito lahy mpanolo-tsainy hianao, mba handinika ny toetr'i Jodà sy Jerosalema araka ny lalàn'Andriamanitrao izay eo an-tànanao; 15sy hitondra ny volafotsy amana volamena nomen'ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsainy, an-tsitra-po, ho an'Andriamanitr'Israely, izay manana ny fonenany ao Jerosalema; 16mbamin'ny volamena amana volafotsy rehetra mety ho azonao eran'ny faritanin'i Babilona ary koa ny fanomezana an-tsitra-po avy amin'ny vahoaka sy ny mpisorona, izay atolony an-tsitra-po ho an'ny tranon'Andriamaniny any Jerosalema. 17Koa ho ahinao ny hividianana amin'izany vola izany ny ombalahy, ondralahy, zanak'ondry, mbamin'izay hatao fanatitra amam-panatitra araraka momba azy, dia atero eo ambony otely ao an-tranon'Andriamanitrareo any Jerosalema izany. 18Ary ny volafotsy amana volamena sisa dia ataovy amin'izay heverinao sy ireo rahalahinao ho mety, manaraka ny sitra-pon'Andriamanitrareo. 19Apetraho eo anatrehan'Andriamanitr'i Jerosalema ny fanaka natolotra anao, hanaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitrao. 20Izay fanampiny mbola ilaina koa, ao amin'ny tranon'Andriamanitrao, dia hovononinao avy amin'ny trano firaketan'ny mpanjaka. 21Izaho Artakserksesa mpanjaka manome didy ho an'ireo mpitahiry vola rehetra any an-dafin'ny ony, mba hanatanteraka tsy misy tomika izay rehetra hilain'i Esdrasa mpisorona sy mpanora-dalàna, mahay ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra, aminareo, 22hatramin'ny talenta volafotsy zato, varimbazaha zato kora, divay zato bata, diloilo zato bata, ary sira araka izay tiany. 23Tanteraho an-tsakany sy an-davany izay rehetra andidian'Andriamanitry ny lanitra, ny amin'ny momba ny tranon'Andriamanitry ny lanitra, mba tsy hiharan'ny fahatezerany amin'ny fanjakan'ny mpanjaka sy ny zanany. 24Ampahafantarinay anareo koa, fa tsy misy azo angalana hetra, na haba, na sara, ny mpisorona, ny levita, ny mpihira, ny mpiandry varavarana, ny Natineana, mbamin'izay rehetra manompo amin'io tranon'Andriamanitra io. 25Ary hianao, ry Esdrasa, araka ny fahendren'Andriamanitrao, izay eo an-tànanao, dia manendre mpitsara sy andriambaventy hitsara ny vahoaka rehetra any an-dafin'ny ony, amin'izay rehetra mahalala ny lalàn'Andriamanitrao, ary ampianaro izay tsy mahalala. 26Na zovy na zovy tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitrao, sy ny lalàn'ny mpanjaka, dia aoka izy hovaliana araka ny rariny, na hovonoina, na hasesi-tany, na hosazina vola, na hatao an-tranomaizina.
27Isaorana anie Iaveh Andriamanitry ny razantsika izay nanome hevitra ny fon'ny mpanjaka mba hanome voninahitra ny tranon'ny Tompo ao Jerosalema toy izany, 28sy nampahita fitia ahy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanolo-tsainy ary ny manam-pahefana ambony rehetra ao amin'ny mpanjaka. Koa nahazo hery aho fa nomba ahy ny tànan'ny Tompo Andriamanitro, ka nanangona ny loholona amin'Israely hiara-miainga amiko. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1446 seconds